Manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 andro. Ny fotoana fandefasana ho an'ny AirPods dia milatsaka indray | Avy amin'ny mac aho
Manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 andro. Milatsaka indray ny ora fandefasana ny AirPods
Marina fa io fihenan'ny fotoana fandefasana entana io dia atao any Etazonia ankehitriny ary mihamatanjaka erak'izao tontolo izao, saingy marina ihany koa fa ny 1-3 andro handefasana vokatra Apple dia normal.
Ho fanampin'izany, matetika dia manana vinavina i Apple alohan'ny hampihenany betsaka ny ora fitaterana ny vokatra iray, noho izany dia azo inoana fa ireo 1 ka hatramin'ny 3 andro izay manao doka amin'ny tranokala American Apple dia raiso ny AirPods ho tonga any an-trano, dia ho zavatra ambany izy io. Raha fintinina dia toa marina fa manery ny milina famokarana izy ireo ary manara-penitra ny tahiry an'ity vokatra Apple tadiavina ity.
Mba hahatongavana amin'ny vanim-potoana Krismasy amin'ny tahiry faran'izay betsaka azo atao, ara-dalàna ny hanafainganana ny zava-drehetra ary tsy maintsy tadidina ihany koa fa ny ankamaroan'ny mpampiasa te-hividy AirPods dia efa manana izany. Apple dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa miasa mafy izy amin'ny fampitomboana ny tahiry ny vokatra ary toa izany.
Tokony homarihina ihany koa ny tsy fantatra momba ny boaty famandrihana tsy misy tariby vaovao ho an'ny AirPods fa i Apple dia naneho taminay tamin'ny fehezanteny farany tamin'ny volana septambra, izay tsy mazava raha fitaovana fanampiny iray na hanampy ao amin'ny AirPods izay hanomboka hamidy amin'ny volana ho avy. Noho io antony io dia mpampiasa maromaro no mitazona ny fividianana mandra-pahafantatra mazava tsara ny fomba hiafarany.
Mety ho any amin'ny firenentsika izy ireo dia manohy amin'ny fotoana fandefasana somary miadana kokoa noho ireo hitantsika ao amin'ny tranonkalan'ny Etazonia, ireo fotoana izay mampiseho fanaterana 2-3 andro ireo dia mety hihena, saingy efa azontsika lazaina fa mividy AirPods it tsy odyssey ary inona angamba raha mankany amin'ny Apple Store isika dia afaka mividy azy ireo nefa tsy miandry ny ora fandefasana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 andro. Milatsaka indray ny ora fandefasana ny AirPods
David hupa dia hoy izy:
Misy fahasamihafana ve amin'ireo vaovao amin'ireo?, Misaotra
Valiny tamin'i David Hupa
Izay lafo kokoa.
Ahoana ny fomba hahitana ny pikantsary rehetra amin'ny Mac avy amin'ny Finder
Jereo ny tsiambaratelo rehetra amin'ny lanitra amin'ny SkySafari ho an'ny Mac